Sakaria 4 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Anisoadehu 5: Kaneadua ne ngodua abien (1-14)
‘Ɛnyɛ nnipa ahoɔden, na mmom me honhom’ (6)
Mmu ɛda a adwuma no fii ase nketenkete no animtiaa (10)
4 Na ɔbɔfo a na ɔne me rekasa no san bae, na onyan me te sɛ nea ɔrenyan obi a wada. 2 Ɛnna obisaa me sɛ: “Ɛdɛn na wuhu?” Na mekae sɛ: “Hwɛ! Mihu kaneadua bi a wɔde sika kɔkɔɔ nko ara+ na ayɛ a kankyee si so. Nkanea ason sisi so,+ yiw, ason; na nkanea a esisi so no wowɔ dorobɛn ason. 3 Na ngodua abien sisi ho;+ baako wɔ kankyee no nifa so, ɛnna baako nso wɔ benkum so.” 4 Afei mibisaa ɔbɔfo a ɔne me rekasa no sɛ: “Me wura, eyinom nyinaa kyerɛ dɛn?” 5 Na ɔbɔfo a ɔne me rekasa no nso bisaa me sɛ: “Enti wunnim nea eyinom nyinaa kyerɛ?” Ɛnna mekae sɛ: “Minnim, me wura.” 6 Afei ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Yehowa asɛm a ɔreka akyerɛ Serubabel ni: ‘“Ɛnyɛ asraafodɔm anaa nnipa ahoɔden,+ na mmom me honhom na menam so bɛyɛ eyinom nyinaa,”+ asafo Yehowa asɛm ni. 7 O bepɔw kɛse, woyɛ hena? Wobɛdan asaasetraa+ wɔ Serubabel anim.+ Na ɔde atifi bo no bɛba bere a wɔrebɔ ose. Wɔbɛbɔ ose aka sɛ: “Hwɛ ne fɛ! Hwɛ ne fɛ!”’” 8 Na Yehowa asɛm san baa me nkyɛn bio sɛ: 9 “Serubabel nsa na ɛtoo ofi yi fapem,+ na ɔno ara nsa na ebewie.+ Na wubehu sɛ asafo Yehowa na asoma me mo nkyɛn. 10 Mma obiara mmmu ɛda a adwuma no fii ase nketenkete no animtiaa.+ Efisɛ wobedi ahurusi, na wobehu prumo* wɔ Serubabel nsam. Ason yi yɛ Yehowa aniwa a ekyin fa asaase nyinaa so no.”+ 11 Na mibisaa no sɛ: “Ngodua abien a esisi kaneadua no nifa ne ne benkum yi kyerɛ dɛn?”+ 12 Ɛnna mibisaa no ne mprenu so sɛ: “Ngodua nkorabata* abien yi, nea ehwie ngo a ani te sɛ sika kɔkɔɔ fa sika kɔkɔɔ dorobɛn abien mu no, ɛkyerɛ dɛn?” 13 Na obisaa me sɛ: “Enti wunnim nea eyinom kyerɛ?” Ɛnna mekae sɛ: “Minnim, me wura.” 14 Enti ɔkae sɛ: “Eyinom ne nnipa baanu a wɔasra wɔn a wogyina asaase nyinaa Wura no nkyɛn no.”+
^ Nt., “ɔbo no, sanyaa no.” Ɛyɛ hama bi a dade hyɛ ano a wɔde susuw ɔdan hwɛ sɛ ɔdan no teɛ anaa.
^ Kyerɛ sɛ, dua no nkorabata a asow dɔsɔɔ no.